Uganda Tourism yakapa Safer Tourism Endorsement
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda Tourism yakapa Safer Tourism Endorsement
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News • Akasiyana Nhau
Uganda Tourism ndiyo nzvimbo yechitatu yakapihwa chibvumirano nenyanzvi dzeSafer Tourism Seal. Uku kubudirira kwakangopihwa kuKenya neJamaica zvisati zvaitika. Iyo endorsement yakavakirwa pakuongorora uye haigone kutengwa.
20 nzvimbo uye vanobatika vakakumbira ongororo yakazvimirira, uye mazana evane chekuita munyika makumi mashanu uye gumi nematanhatu eUnited States ari kuratidza Sefa Yekushanya Yakachengeteka zvichibva pakuzviongorora kwavo. Vatungamiriri gumi nevanomwe vekushanyirwa vakaendeswa muhoro yepasi rose yemagamba ezvekushanya.
The Yakachengeteka Tourism Seal chirongwa chekutanga ne kuvaka.travel, musangano wepasi rose wepasi nevatungamiriri vevashanyi munyika zana nemakumi maviri.
Wadiwa Ms Ajarova & Mr. Semakula:
Zviri nemufaro mukuru uye nerukudzo kuti tinoda kupa Uganda Tourism Board neRuilding Travel's Safer Tourism Seal.
Zvichibva neruzivo rwawakapa kusangano reSafer Tourism maererano neUganda, ini ndagadzirira mushumo unotevera weTB.
Tourism ndiyo imwe yemabhizimusi anotungamira pasi rose uye chishandiso chikuru chekuvandudza hupfumi, uye nekudaro, chengetedzo (mhosva nehugandanga) zvine chekuita nezvenzvimbo dzekushanyirwa, kufamba kwechikepe, uye hupfumi hwakanangana nezviitiko. Pamusoro pezvo, zvizhinji pasirese zvakakanganiswa nedenda reCOVID-19, uye mhedzisiro yaro mukushanya kwave kukuvadza
Uganda inogona kuzvitutumadza zvikuru mukuti vazhinji vevamiriri vehurumende vanonzwisisa zvekushanya
Hurumende yeUganda inoziva kukosha kweindasitiri yayo yekushanya
Hurumende yeUganda inoziva kukosha kweindasitiri yayo yekushanya. Uganda inozivikanwa pasi rese nekuda kwerunako rwechisikigo, dzakasiyana siyana zvinokwezva, misha yayo ine nhoroondo, uye mhuka dzayo dzesango. Indasitiri yekushanya kuUganda haisi chete chishandiso chikuru chekuvandudza hupfumi asi zvakare chikamu chikuru muhupenyu hweUganda.
Uganda inogona kuzvitutumadza zvikuru mukuti vazhinji vevamiriri vehurumende vanofarira zvekushanya Ivo vanonzwisisa kukosha kwekushanya uye kuti kushanya kunochinja sei mukurumbira wenyika uye kumira kwete mukushanya chete asiwo pasirese.
Munyika yanhasi inotongwa nedenda re COVID-19, vese vagari vemuno nevashanyi pasi rese vanoda kuchengetedzwa nekuchengetedzwa kunoitwa nenyanzvi dzakanyatsodzidziswa. Veruzhinji vanofamba vanonzwisisa hukama uripo pakati pekuchengetedza, chengetedzo, mukurumbira, kugona kwezvehupfumi, uye hutano. Izvi zvinhu zvishanu kana zvabatanidzwa zvinonzi chivimbo chekushanya. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi chakakosha mukuhwina Sefa Yakachengeteka Yekushanya uye kuratidza kuti chinopihwa chinzvimbo chinoita zvese zvinogoneka kuvimbisa chikamu chepamusoro chekushanya chinogoneka. Chisimbiso chinoziva kuti hapana 100% chengetedzo uye chengetedzo pasirese. Ndicho chikonzero ichi kuti chisimbiso chinoshandisa izwi rekuti "kushanya kwakachengeteka." Zvinotaridza kuti chikamu chakapihwa chisimbiso chakadai chakamisa chirongwa chekushomeka chinodaidzira chiongororwazve, kudzokororwa, uye kukwidziridzwa. Iyo Yakachengeteka Tourism Seal inobvuma kuti iyo yakapihwa sangano inonzwisisa zvizere kuti matanho matsva anofanirwa kuunzwa sezvo mamiriro ezvinhu achida.
Ndicho chikonzero ichi, Kuvakazve Tourism inopa Sefa yavo Yekushanya Yakachengeteka chete kumasangano ekushanya, mabhizinesi, nenzvimbo dzinoziva kuti iro basa rekutanga rekugamuchira vaenzi kuchengetedza kwevashanyi varo uye nevaya vanoshanda muindastiri. Chirevo chechisimbiso ndechekuti: "chengetedzo, chengetedzo, uye hutano kutanga."
Gurukota reUganda rezveKushanya mukukurukurirana neKuvaka zvekare Tourism yakaratidza kuti inonzwisisa kuti chokwadi chekushanya chinosanganisira kudzidziswa, dzidzo, kudyara musoftware, uye kunzwisisa kuti chengetedzo / rubatso harisi nyore kuranga. Munguva yekuchinja kukuru nematambudziko kubva pazvinhu zvehutano kusvika kuchengetedzeka, iyo Ministry of Tourism yeUganda yakaratidza kuti inogamuchira chokwadi chekuti vashandi vayo vekushanya vacharamba vachidzidziswa uye vanofanirwa kuchinjika zvakakwana kuti vagadzirise maitiro avo kuenda kunzvimbo inogara ichichinja .
Bazi reUganda rezveKushanya rakaratidza kuzvipira kwaro kushanya zvakanaka kuburikidza nevanhu vaviri vanobvunzurudzwa parunhare uye nekupindura zvinogutsa pakunyora mibvunzo yakadzama yakawanda maererano nehutano nekuchengetedzeka kwavo kwete kwete chete maererano nezvedenda razvino asiwo sezvavanoita zvine chekuita nehurongwa hwayo hwese hwekushanya.
Bazi iri rakaratidza kuburikidza nekubvunzurudzwa nemuromo uye nekunyora kuti rakazvibatanidza mukugadzira chigadzirwa chakachengeteka chekushanya. Izvi zvakaratidzawo muongorori weSafer Tourism kuti Uganda iri kuita zvese zvinogoneka kugadzira nzvimbo yakachengeteka, uye ine hutano nekushanda pamwe nemasangano epasi rese, nekutora chikamu nemasangano enharaunda, uye nekudyidzana nevanoona nezvekuchengetedzwa kwekushanya pamwe nehunyanzvi.
Ministry of Tourism yeUganda yakaratidza kuti iri kutora matanho ekuedza kuvimbisa vashanyi nezveruzivo rwekushanya rwakachengeteka. Bazi rinonyatsonzwisisa kuti hapana munhu anogona kuvimbisa 100% chengetedzo uye chengetedzo uye kuti hapana munhu acharwara. Izvo zvainogona kuita kupa yakanakisa yekushanya matanho echokwadi matanho anogona. Neichi chikonzero, hurumende inoshuma kuti:
Uganda inofanira kuenderera mberi nekugadzira nekuvandudza hutano hwayo uye zvivimbiso panguva yakakodzera uye yedunhu.
Uganda inofanira kuisa hutano chaihwo, hutsanana, kutapukisa utachiona, kusimudzira, uye nzira dzekuchengetedza izvo zvinodhura uye zvinoshanda-zvinoitwa nehurumende yako.
Uganda inoteedzera nhungamiro dzekunze dzekushandurana munharaunda kune vese vashandi nevashanyi uye dzinoshanda kugadzira mabatirwo-mashoma mhinduro pazvinogoneka. Rudzi rwuri kuita maratidziro asingabate chero kupi uye pese pazvinogoneka uye inoshandisa tekinoroji kudzikisira kudyidzana mumahotera, maresitorendi, nzvimbo dzekufambisa, nezvimwe.
Uganda yakagadzira mutemo unodhura uye unoshanda wePPE.
Ministry of Tourism yeUganda inoda kuti vapfeke mamask kana kushamwaridzana kwevanhu kuchiitika kana vanhu vari pasi pemamita maviri kubva kune mumwe nemumwe. Mitemo mimwe cheteyo inoshanda kukufambisa kwevanhu.
Uganda inokumbira kushambidzwa kwemaoko nekucheneswa kwemakamuri emahotera nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji kana zvishandiso zvinoshandiswa neruzhinji.
Nyika inoita zvese zvinogoneka kuchenesa dzimba dzekurara dzevaenzi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Uganda inoongorora zvakanyanya kushandiswa kwekuchenesa uye kutapudza utachiona munzvimbo dzinojairika (zvimbuzi, dzimba, makoridho, malifti, nezvimwewo) sedanho rekudzivirira mukati menguva ye COVID-19 denda.
Kunyanya kutarisirwa kunopihwawo kuzvinhu zvinowanzobatwa sekubata, mabhatani eelevheta, mabhanduru, switch, zvigubhu zvegedhi, nezvimwewo Kuchenesa vashandi vanorairwa nenzira kwayo. Izvi zvinotevera zvinoitirwa makamuri kana nzvimbo dzakananga dzakaratidzwa kune COVID-19 kesi:
a) Nzvimbo dzese dzinosvibiswa nekufema kana zvimwe zvinwiwa zvemuviri zvevarwere, semuenzaniso chimbuzi, mabheseni ekugezesa maoko, nemabhati zvinofanirwa kucheneswa nemushonga unorwisa mabhakitiriya wemumba.
b) Makara-akacheneswa ekuchenesa matunhu akasiyana kuti arege kusvibiswa.
c) Vashandi vebasa vanoda kuwedzerwa kudzidziswa mukugadzirira, kubata, kuisa, uye kuchengetedza zvigadzirwa izvi, kunyanya bleach, iyo inogona kunge iri pakakwirira zvakanyanya kupfuura zvakajairwa.
d) Pese pazvinogoneka, kushandiswa chete kwekurasa zvinhu zvekuchenesa zvinokurudzirwa. Chero chipi zvacho chekuchenesa chakagadzirwa nemachira uye nezvinhu zvinopinza, semuenzaniso misoro yemusoro uye kupukuta machira, zvinoraswa.
e) Zvinhu zvese zvakashandiswa zvinofanirwa kugadziriswa nenzira kwayo kudzikisira njodzi yekutapurirana. Zvinhu zvinoraswa (matauro emaoko, magurovhosi, masiki, zvinyama) zvinofanirwa kuiswa mumudziyo une muvharo uye wozoraswa zvinoenderana nehurongwa hwekuita kwehotera nemirau yenyika yekurasa marara utachiona.
f) Kuchenesa vashandi vanodzidziswa pakushandisa PPE uye nehutsanana hwemaoko.
g) Makamuri ese nenzvimbo dzakajairwa anofanirwa kuve nemhepo zuva nezuva.
Sezvacherechedzwa, hurumende inoshanda kushandira vanochenesa maoko zvichienderana nezvinodiwa neruzhinji neindasitiri yekushanya. Automated uye nemaoko-anoshandiswa nemaoko sanitizers akaiswa munzvimbo dzese dzinonetsa uye nekuenderera mberi.
Hurumende yaita chirongwa chekudzidzisa nzvimbo dzese dzekushanya nemabhizinesi ekuti vangashandise sei kupatsanurana uye panguva imwechete vanoziva kudiwa kwenyika nezvakatipoteredza.
Uganda yakanyanya kutarisisa nzvimbo dzekufambisa dzakadai sedzinomira panhandare yendege uye inosimbirira nzvimbo dzekutakura dzekunze nemabhizimusi senge ndege kuti vatevedze "Yekutora: Nhungamiro yeKufamba Nendege kuburikidza neCOBV-19 Ruzhinji Hutano Dambudziko."
Vapindura vekutanga vekuUganda vakadzidziswa mashandisirwo ePamunhu Yekudzivirira Midziyo uye nekubata kwezviitiko mumatambudziko ehutano. Kunyanya kutariswa kunopihwa kune vese vekutanga anopindura kuchengetedzeka uye neiyo yevaeni vayo.
Masangano anotonga eUganda anonyatsonzwisisa kuti mamiriro ezvinhu paanofambira kana kushanduka kuti marongero ake anogonawo kuchinja kuitira kuchengetedza vashanyi kusvika pamwero wakazara.
Uganda ine zvipatara zvakakosha zveCOVID-19-izvo zviri kunze kwemiganhu kune vasiri varwere.
Munguva yeCOVID-19 nguva, Uganda inonzwisisa kuti inofanirwa kuchengetedza vashanyi vayo kubva kune dzimwe nzira dzekutyisidzira dzakadai sedzemhosva. Kudzivirirwa kwevashanyi nekudzivirira mhosva dzekushanyirwa zviripo uye zvicharamba zviri pamberi pezvematongerwo enyika.
Uganda inovandudza maratidziro ayo ezvekushanya uye nekuvandudza ayo nyanzvi dzekushanya zuva nezuva.
Yakachengeteka Tourism Seal , saka, inodada kupa iyo Uganda Ministry of Tourism neSafer yayo Yekushanya Seal yekubvumidzwa, zvichibva pakuwongorora uye kutsigira.
Dr. Peter Tarlow, Sachigaro Safer Tourism
Uganda Tourism Board inhengo ye African Tourism Bhodhi
Zvizhinji paUganda Tourism: www.chandiraman.com
Zvimwe pane Zvakachengeteka Tourism Seal: www.musaiforil.com
Zvimwe pane Kuvakazve Kufamba: www.rereiting.travel